Nepali Rajneeti | किन राम्रो मान्छे वन्ने जव राम्रो मान्छे धेरै वाँच्दैन भने ? कमेन्ट गर्नुस् साथिहरु ।
किन राम्रो मान्छे वन्ने जव राम्रो मान्छे धेरै वाँच्दैन भने ? कमेन्ट गर्नुस् साथिहरु ।
बैसाख १८, २०७८ शनिबार ४०८ पटक हेरिएको
मी सबैको मुखबाट निस्कने एउटै शव्द हो । राम्रो मान्छे किन लामो समय बाँच्दैन ? किन राम्रो मान्छेहरु चाडै नै मर्छन् ?
अनुहारको भन्दा पनि मनका राम्रा मान्छेहरु नै चाडै मर्ने गरेको पाइन्छ । कोही मान्छे सबैलाई सेवा गर्न तत्पर हुन्छ, समाजसेवामा आफ्नो जिन्दगी दिन्छ, सबैको प्रिय हुन्छ भनेर राम्रो राम्रो काम मात्र गर्छ भने हामी उसलाई राम्रो मान्छे भन्छौं ।
राम्रो भन्नाले अनुहारले हैन व्यवहारले हुने गर्दछ ।
समाजमा मान्यगुण्यको आयु किन लामो हुदैन ।
कहिलै नराम्रो नबोल्ने, कसैलाई तुच् बचन नबोल्ने मान्छेहरु नै किन चाडैं मर्छन् त ?
राम्रा मान्छेहरु भित्रबाट नै टुटिसकेका हुन्छ । उनीहरु मन देखि नै नाइ भन्न सक्दैन ।
नाइ भन्दा रिसाउँला कि भनेर डराउँछन्। अरुलाई नराम्रो भन्दा मन दुखाउँछ कि भनेर बरु भित्रभित्रै आफु कुडिन्छन् र आफै टुट्छन् ।
उनीहरु सत्य बोल्न डराउँछन् । अरुको चित्त नदुखाउनको लागि उनीहरु सबै कुरा मनमा नै गुम्साएर बस्छन् ।
हनुमान जयन्तीको तिथि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी र चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दुवै दिनलाई मानिएको छ । धर्म शास्त्रमा मतैक्य नहुनाले चैत्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन हनुमानजीको जन्म दिवस मनाउने त गरिन्छ, यद्यपी वायु पुराणादी–अनुसार कार्तिक महिनाको चतुर्दशीका दिन हनुमान जयन्ती अधिक प्रचिलित छ ।
विशेष गरी हनुमानलाई जिवित देवताको रुपमा पुजा गरिन्छ ।